tsena: Martin Vrijland
Ny fianjerana ara-toekarena izay efa nambara mialoha dia tonga: Merry Christmas
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 24 Desambra 2018	• 26 Comments
Tsy vitako ny naminavina ny faminaniana tamin'ny volana Desambra tamin'ny taona lasa fa hianjera ny toekarenan'ny Amerikana (ary noho izany izao tontolo izao). Izaho koa nanao izany nandritra ny fifidianana Donald Trump. Ny fitomboan'ny tahan'ny zanabola, ny banky foibe amerikana, tamin'ny herinandro lasa, dia toa efa nahazo ny fanosehana farany. Efa misy ny vatsim-pianarana [...]
Moa ve ny filoham-pirenena Amerikana dia mila fehezan-tsivily sandoka haingana be mba hialana amin'ny fotoan-tsarotra?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 26 Oktobra 2018	• 28 Comments
Ny olana momba ny baomba sandoka nalefa tamin'ny karazana anarana goavambe toa an'i George Soros, Hillary Clinton, Barack Obama, Robert de Niro ary CNN (ary angamba adinoko vitsivitsy) dia toa tena fotoana fohy. Ity hetsika ity miaraka amin'ireo baomba sandoka dia mifanaraka tanteraka amin'ilay sary lehibe, izay hataoko [...]
Amerika dia very hery sy hery noho ny ady an-tsokosoko Trump
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 4 Martsa 2018	• 18 Comments
Mazava ho azy fa azontsika atao ny hampihatra izany amin'ny fampielezan-kevitra Rosiana, saingy nandresy fitaovam-piadiana mahery vaika tamin'ity herinandro ity i Vladimir Putin. Noho izany dia toa nanjavona ny toeran'ny manampahefana Amerikana sy noho izany ny OTAN amin'ny famelezana 1 rehefa tonga eo amin'ny akanjon'ny sambo nananganana an'i Rosia izahay. Ary nandeha [...]
Vola be ny varotra sy varotra vola; Ny Deutsche Bank dia miezaka ny mamonjy ny tenany (foana)?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 7 Oktobra 2016	• 8 Comments
Ny Britanika kilao (GBP) no nianjera androany 6% fa indray ka nahavita hametra fatiantoka mba 2,6%. Ny ambany fianjeran'i Britanika antsasa-kilao dia ho vokatry ny fanambarana ny filoha frantsay Hollande. Dia ho nampirisika ny EU ny fifampiraharahana henjana momba ny Grande Bretagne sy ny mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana Gibraltar fitsapankevi-bahoaka. Ny AEX eo [...]
Hiatrika ny krizy lalina indrindra ve isika?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 29 June 2016	• 18 Comments
Toa ny Brexit, toy ny efa nomaniko ato amin'ity lahatsoratra ity, fa ny tetikasa goavana dia ny fikorontanana ny toekarena manerantany. Fanapoizam-bolo maneran-tany. Ny banky manerana an'i Eoropa dia eo ambany elatr'izy ireo hatramin'ny taona 30. Ny toetr'andro ratsy izay nifanandrify tamin'ny fitsapa-kevi-bahoaka Brexit tamin'ny herinandro lasa dia toa hafatra ho an'ny adihevitra momba ny fotoana henjana. [...]
Ny ampahan'ny banky lehibe sy ny AEX dia sarotra ho avy androany, mandevona ny fampindramana
Filed in TOEKARENA	by Martin Vrijland	amin'ny 11 Febroary 2016	• 8 Comments
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha roa amin'ny tanako no naminavina fa izao tontolo izao ny toe-karena dia handeha amin'ny manaraka mafy ny fitombenako (jereo eto sy eto). Ankehitriny dia toa izany no dingana tena tany ambany indrindra hirika ny tahiry sarobidy ny banky lehibe. Ny AEX dia midina mafy ihany koa amin'ny fotoana mitovy. Eto ambany [...]
Ny Wall Street dia nidina ho an'i Shina androany
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 1 September 2015	• 4 Comments
Ny Wall Street dia miverina indray amin'ny raharaham-barotra vao haingana taorian'ny endrika ratsy teo amin'ny sehatry ny orinasa Shinoa. Ny sehatry ny indostria ao Shina dia nijaly noho ny fahapotehana haingana indrindra nandritra ny enin-taona mahery. Ny sehatra hafa amin'ny toekarena Shinoa dia hanao tsinontsinona ihany koa, hoy ny tatitra nataon'ny Infowars. Na izany aza, raha mamaky fanadihadiana momba ny lalao ara-bola manerantany amin'ny Globalresearch isika, dia [...]
Inona koa no azontsika antenaina amin'izao fotoana izao fa mihena ny tsenam-bola?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 25 August 2015	• 12 Comments
Ny alatsinainy maraina dia nitatitra aho fa nirotsaka ny fifanakalozam-bola tao Shina ary naminavina aho fa hitranga any Eoropa sy Amerika izany. Nitranga izany toy ny faminaniany. Mihetsika ny laconic ny olona ary tsy mahatsapa ny mety ho vokatr'izy ireo amin'ny latsa-pirahalahiana vitsy monja. [...]
Total visits: 13.753.156
Inona ny olan'ny nitrogen, maninona no mitaraina ny tantsaha ary nahoana ny fihenan'ny hafainganam-pandeha?
Philippe Schol, mpisolovava, dia nitifitra ny tatitra momba ny fanonganana an'i Schiphol
Camera 2 op Ny satroboninahitra satroboninahitra sy ny lalao eo amin'ny fanjakana sy ny heloka bevava proxy (mpisolovava Meijering mifanohitra amin'i Plasman)
guppy op Ny satroboninahitra satroboninahitra sy ny lalao eo amin'ny fanjakana sy ny heloka bevava proxy (mpisolovava Meijering mifanohitra amin'i Plasman)
Martin Vrijland op Ny satroboninahitra satroboninahitra sy ny lalao eo amin'ny fanjakana sy ny heloka bevava proxy (mpisolovava Meijering mifanohitra amin'i Plasman)
Zonnetje op Ny satroboninahitra satroboninahitra sy ny lalao eo amin'ny fanjakana sy ny heloka bevava proxy (mpisolovava Meijering mifanohitra amin'i Plasman)